Cabdi Illey oo Lagu Eedeeyay In Gacanta Lagu Soo Dhigay Xilli uu Ka Baxsanayay Jeelka | Baligubadlemedia.com
Cabdi Illey oo Lagu Eedeeyay In Gacanta Lagu Soo Dhigay Xilli uu Ka Baxsanayay Jeelka
Ciidamada Danbi Baadhista ee dalka Ethiopia ayaa sheegay in Madaxweynihi hore ee Deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdi Maxamuud Cumar uu isku dayay in uu ka baxsado Xabsiga, ka dib markii uu jajabiyay daaqada Qolka uu ku jiray.
Markiii uu cabasho hore uga muujiyay qolka uu ku jiro ayaa waxa ay ciidamada Xabsiga Maamulaa u wareejiyeen Qol kale, hasayeeshee waxa uu ku dacwoonayaa in qof madaxa ka jiran oo lagu ag xidhay xidhay uu ku soo tuuray dhagax isla markaana sidaas uu ku jabiyay Daaqadii uu ku jiray, hasayeeshee ay sharaf dil ku tahay in lagu soo eedeeyo in uu damacsanaa in uu ka baxsado qolka uu u jiro.
waxa kale oo uu ku dooday in qofka wax ku soo tuuray uu damacsanaa in uu naftiisa dhaawac u geysto, hasayeeshee aanay marnaba ka suurtoobin uu isku dayo ka baxsashada xabsiga uu ku jiray.
Wuxuuna intaa ku daray “Waxa laga sheegay iney been tahay shaqsi ahaanna cadaadis aad u weyn lagu hayo. Xabsi aan munaasab ahayna lagu xiray, nin maskaxda ka jirran oo ku xiran qol isaga ku dhaggan kan uu isagu ku jiro inuu 2 mar albaabka uu ku soo jabiyey oo uu waxyeella u geysan gaadhay xaaladdaasina ay ammaankiisa khatar aad u weyn ku hayso.”
Dambi baadhaha kiiska Cabdi gacanta ku hayana wuxuu maxkamadda horteeda uu ka sheegay “inuu Cabdi uu ku xidhan yahay xabsiyada caadiga ah ee maxabiista caadiga ah lagu xidho, wax cadaadis oo si gaar ah isaga looga hayana aanu jirin.
Wuxuuna dambi baadhuhu intaa ku daray “boolisku wixi dhacay markay Cabdi kala hadleen oo rabshadda xabsiga ka dhacday inuu isagu sabab u ahaa inuu qirtay isla-markaana raalli gelin uu ka bixiyey.”
Booliskuna waxay maxkamaddu weydiisteen “10 maalmood oo kale oo ay Kiiska Cabdi baadhitaan dheeraad ah ugu soo sameeyaan in la siiyo.”